ခိုတောင်မုန့်တီနဲ့ မန်းလေးအစားအစာ စားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ‘ ရတနာအောင် ’ 2144 views
ခိုတောင်မုန့်တီနဲ့ မန်းလေးအစားအစာ စားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ‘ ရတနာအောင် ’
အလုံ၊ နှင်းဆီလမ်းနဲ့ ငုဝါလမ်းထောင့်နားက ရတနာအောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုမှတ်မိကြလားဟင်… အဲ့ဒီဆိုင်မှာ နာမည်ကြီးတာက မန်းလေးမြီးရှည်၊ အုန်းထမင်းနဲ့ ကြာဇံချက်။ ဒီဆိုင်အကြောင်းလည်းရေးဖူးပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်ကတော့ အရင်ကနဲ့မတူတာလေးတွေတွေ့ခဲ့လို့ပြန်ရှဲချင်ပါတယ်…. ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ရခဲတဲ့ ရာသီပေါ်အရွက်သုပ်နဲ့ မန်းလေးဒေသရဲ့အစားအစာတော်တေ်ာများများကိုရရှိနိုင်တဲ့ဒီ ရတနာအောင် မှာရရှိနိုင်မှာပါ…။
ရတနာအောင်မှာ ပုံမှန်ရတာက မန်းလေးမြီးရှည်၊ ကြာဇံချက်၊ အုန်းထမင်းနဲ့အခြား ထမင်းနဲ့တွဲစားနိုင်တဲ့ အသုပ်တွေမျိုးစုံရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအသုပ်တွေထဲမှာမှ အခုတွေ့ခဲ့တာတော့ ရာသီပေါ်အရွက်သုပ်…. ဒါဟာ ရန်ကုန်မှာအတော်ကိုမှတွေ့ရခဲပါတယ်။ စားရခဲပါတယ်။ အခုတောင်အက်မင်မွေးနေ့ဆွမ်းကပ်ချင်လို့ ဒီဆိုင်က အုန်းထမင်းအော်ဒါလာမှာရင်းနဲ့ ဆိုင်ကအန်တီကရာသီပေါ်အရွက်သုပ်တွေရတယ်ဆိုတော့… အမေကလည်း စားချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ စားဖြစ်ခဲ့တာပါ….။
ကိုယ်ကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ မန်းလေးမြီးရှည်ကိုကြိုက်လို့အဲ့ဒါလေးစားခဲ့တယ်။ သူကတော့ဒီိဆိုင်ရောက်တဲ့လူတိုင်း စားဖူးကြမှာပါ… အရသာလည်းကောင်းပြီးတန်လည်းတန်တော့လူကြိုက်များတယ်။ နောက် တစ်ခုက ခိုတောင်မုန့်တီ။ တော်တော်များများတော့ကြားဖူးကြလိမ့်မယ်နော်… အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကိုယ်တော့အခုမှစား ဖူးတာ။ ခိုတောင်မုန့်တီရတဲ့ဆိုင်နဲနဲပဲရှားသလား၊ ကိုယ်ပဲမတွေ့သလားတော့မသိ… အဲ့တော့မစားဖြစ်ဖူး။ ဒီမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးမို့စားကြည့်လိုက်တယ်။ သူကနန်းကြီးဖတ်ကိုမှ သူ့ရဲ့အရသာအနှစ်တွေ၊ နောက် ပဲသီး၊ ဂေါ်ဖီတွေထည့်သုပ်ထားတာ။ ပဲမှုန့်လည်းပါတယ်ပေါ့… သူ့ကိုတော့သပ်သပ်လွတ်အနေနဲ့စား ကြတယ်တဲ့။ ပဲကြော်(မတ်ပဲကြော်)နဲ့တွဲစားကြတယ်တဲ့။ နောက် ဟင်းရည်ဆိုရင်လည်း ဘာလို့လည်းတော့မသိ တော်တော်သောက်ကောင်းတယ်။ အရသာလေးကလေးလေးရှရှလေးနဲ့… အသုပ်လေးစားလိုက်၊ အရည်လေး သောက်လိုက်နဲ့ပဲ ဟုတ်နေတာ…. သူကတစ်ပွဲကို(၁၀၀၀)ပဲရှိတယ်။ ပဲကြော်ကတော့တစ်ပွဲ(၅၀၀) သူလည်း မတ်ပဲကိုကြော်ထားတာ… အိအိလေးပဲ…။
ခနုံထုပ်လည်းရတယ်။ ခနုံထုပ်ကတော့အချိုတဲဖို့ပေါ့… ဒါလည်းကိုယ်မစားဖူးပြန်ဖူး ကြက်ဥကိုမှ ကော်ပြန့်အဖက်လိုလုပ်ပြီး အဲ့ဒီအဖက်ထဲ ကြက်သားအမွှလေးတွေထည့်ပြီးထုပ်ထားတာ။ သူ့ကိုဆော့စ်လေးနဲ့ တွဲစားရင်ပိုမိုက်တယ်…… တစ်ပွဲကို(၁၀၀၀)ပဲ။ လေးခုပါတယ်…။
ရာသီပေါ်အရွက်သုပ်တွေမှာဆိုရင် ထနောင်းရွက်၊ မြူရွက်၊ တရုတ်စကားဖူး၊ သမုန်းပွင့်၊ ညောင်ချဉ်ဖူး၊ ငါးရံ့ပလူ၊ ကြောင်ရှာ၊ သခွပ်ပွင့်၊ မန်ကျည်းရွက် အဲ့ဒါတွေတော့မီနူးမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အမေကစားရခဲ တယ်ဆိုပြီး မှာလိုက်တာမနည်းဖူး(သုံးယောက်ထဲသွားလို့ပဲ…)… စားခဲ့တာတွေကတော့ တရုတ်စကားဖူး၊ သမားမုန်း၊ ထနောင်းရွက်သုပ်နဲ့ မြူရွက်သုပ်။ အမေနဲ့အဒေါ်ကတော့ပြောတယ်… သူတို့ငယ်ငယ်က အညာဘက်ကိုရောက်ရင် ဒီလိုအရွက်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ခူးပြီးသုပ်စားခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်း အမေနဲ့အဒေါ်နဲ့ပြောလိုက်ကြတာဆိုတာ…. အမြဲတမ်းစားလို့မရတဲ့အကြောင်းနဲ့ မန်းလေးဘက်မရောက်လို့ မစားရတာကြာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းပါးစပ်ကကိုမချဖူး။ နောက် ဒီအရွက်တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်တဲ့။ ဘယ်အရွက်ကတော့ဘာအတွက်ကိုကောင်းစေတယ်ဆိုတာပါပါတယ်…. ဒါလေးတွေစားလိုက်ရလို့ တော်တေ်ာသဘောကျနေကြပုံပဲ
ဆိုင်ကအန်တီပြောတာတော့အရွက်သုပ်တွေကအမြဲတမ်းမရဖူး။ ရာသီပေါ်အရွက်တွေဆိုတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လည်းဖြစ်တယ်။ အညွန့်အဖူးလေးတွေပဲသုံးတာဆိုတော့ ဒီဆောင်းအကုန် နွေအကူးချိန် တစ်လလောက်ပဲရနိုင်တယ်တဲ့။ အချို့အရွက်တွေကိုတော့ အခြောက်လှန်းထားတော့အမြဲတမ်းရတယ်တဲ့။ အသုပ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတစ်ပွဲကို (၁၀၀၀)ကျပ်ပဲ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရင် ဒီအရွက်လေးတွေက ရာသီချိန်မှာပဲစားရတယ်။ တော်တော်လည်းစားရရခဲတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်သင့်တော်တယ်။ အဲ့ဒီအသုပ်လေးတွေစားပြီး ရေနွေးခြမ်းနွေးနွေးလေးသောက်ရ တဲ့ဖီးလ်က အညာကိုရောက်သွားသလို၊ အညာဒေသရဲ့အငွေ့အသက်ကိုခံစားလိုက်ရတယ်တဲ့ (အက်မင်အမေပြောတာ…)
ဒီဆိုင်လေးအကြောင်းရေးဖူးပေမယ့် မတူညီတဲ့မီနူးလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်…. ဒီဆိုင်မှာ အုန်းထမင်းနဲ့ ကြာဇံချက်လည်းရတယ်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေဆိုလည်းဒံပေါက်တွေဘာတွေရတယ်။ အခြားမန်းလေးမြီးရှည်၊ ခိုတောင်မုန့်တီ၊ နောက် ခနုံထုပ် အဲ့ဒါတွေလည်းရတယ်နော်…. လိပ်စာက အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်မှာပါ။ (ငုဝါလမ်းနဲ့နှင်းဆီလမ်းထောင့်)။ အော်ဒါတွေဘာတွေမှာချင်ရင် 09-453302414 ကိုဆက်လို့ရပါတယ်……ဆိုင်အနီးအနားဆို အိမ်လိုက်ပို့ပေးတယ်တဲ့.. ဆိုင်ကမနက်(၆)နာရီထဲကဖွင့်တာနော် ညနေ(၃)နာရီအထိပါ…
#MyLann #Online_Restaurant_Directory #Online_Food_Guide #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Yangon #Foodie_Myanmar